Andro iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy - fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
|Hetsika miverimberina (Jereo rehetra)
Hetsika iray isan-taona manomboka amin'ny 12 ora maraina amin'ny andro 00 Oktobra, miverimberina mandritra ny fotoana tsy voafetra
« Fampianarana momba ny fandriam-pahalemana: hetsika fandefasana virtoaly
Lahateny amin'ny boky - fanantenana sy fifaliana amin'ny fanabeazana: fandraisana an-tanana Daisaku Ikeda manerana ny fandaharam-pianarana sy ny tontolon-kevitra »
Tamin'ny 1995, tamin'ny fivoriambe eran-tany momba ny vehivavy any amin'ny firenena Beijing, dia niara-nanaiky ny Fanambarana sy ny Sehatr'asa ho an'ny hetsika any Beijing - ny drafitra mandroso indrindra mandroso amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy fa tsy ny zazavavy ihany. Ny Fanambarana any Beijing no voalohany niantso manokana ny zon'ny zazavavy.
Tamin'ny 19 Desambra 2011, ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana dia nandray ny fanapahan-kevitra 66/170 hanambarana ny 11 Oktobra ho Andro Iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy zazavavy, hanaiky ny zon'ny zazavavy sy ireo fanamby tsy manam-paharoa atrehin'ireo tovovavy manerantany.
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy dia mifantoka amin'ny filàna vahaolana amin'ny fanamby atrehin'ireo tovovavy ary hampiroborobo ny fanomezana hery ny tovovavy sy ny fanatanterahana ny zon'izy ireo.
Ny zazavavy adolantsento dia manan-jo hanana fiainana azo antoka, nahita fianarana ary salama, tsy mandritra ireo taona feno krizy ireo ihany, fa rehefa mihalehibe koa izy ireo. Raha tohanana tsara mandritra ny taonan'ny fahatanorana, ny zazavavy dia manana ny fahafaha-manova an'izao tontolo izao - samy zazavavy matanjaka amin'izao fotoana izao ary mpiasa rahampitso, reny, mpandraharaha, mpanolo-tsaina, loham-pianakaviana ary mpitarika politika. Ny fampiasam-bola amin'ny fahafantarana ny herin'ny tovovavy adolantsento dia mitazona ny zon'izy ireo ankehitriny ary mampanantena ho avy ara-drariny sy miroborobo kokoa, iray izay ny antsasaky ny olombelona dia mpiara-miombon'antoka amin'ny famahana ny olan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fifandonana politika, ny fitomboan'ny harinkarena, ny fisorohana ny aretina fitohanana manerantany.
Ny tovovavy dia manitsakitsaka ny fetra sy ny sakana ateraky ny stereotypes sy ny fanilihana, ao anatin'izany ireo natokana ho an'ny ankizy sembana sy ireo mipetraka amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika. Amin'ny maha mpandraharaha, mpanavao ary manomboka ny hetsika manerantany, ny tovovavy dia mamorona tontolo iray mifandraika amin'izy ireo sy ny ho avy.
Ny fandaharam-potoanan'ny 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ireo tanjona kendrena ho fampandrosoana maharitra 17 (SDG) natsangan'ireo mpitarika manerantany tamin'ny 2015, dia misy ny tondrozotra iray ho an'ny fandrosoana maharitra ary tsy mamela olona ao aoriany.
Ny fanatrarana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny fanomezana hery ny vehivavy dia tafiditra ao anatin'ny tanjona 17. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny zon'ny vehivavy sy ny tovovavy amin'ny tanjona rehetra hahatongavantsika amin'ny fahamarinana sy ny fampidirana, toekarena miasa ho an'ny rehetra, ary ny fihazonana ny tontolo iombonantsika ankehitriny sy ho an'ny taranaka ho avy.
Andro fandriam-pahalemana / iraisam-pirenena, Hetsika ifantohan'ny tanora
Jereo ny tranokalan'ny mpikarakara
Janoary 24, 2022
Febroary 20, 2022
Hetsika iray isan-taona manomboka amin'ny 12 ora maraina amin'ny andro 00 febroary, miverimberina mandritra ny fotoana tsy voafetra
Jona 19, 2022